The Secret of True Life / Somali by MediaServe - Issuu
Baaridda jawaabaha khuseeya nolosha?
Waxba ha ka walwalina, laakiinse wax kastaba baryadiina Ilaah ku ogaysiiya tukasho iyo duco mahadnaqid la jirto. Oo nabadda Ilaah oo waxgarasha kasta ka sarraysa ayaa Waxay qalbiyadiina iyo fikraddiinaba ku dhawri doonto Ciise Masiixa. Filiboy 4:6-7
NOLOSHA AH RUNTA
Sideen ku helaa nabadgelyo dhab ah?
Ma hubtaa meeshaad ugu dambeyntii hiigsanayso? Ma raran tahay?
Ma raran tahay?
Ma hubtaa meeshaad ugu dambeyntii hiigsanayso?
Sideed ugu noolaan kartaa si waafaqsan Abuuraha ku talagalkiisii ahayd.
U y o d s
Adigu waxaa laguu abuuray inaad ku noolaatid farxad iyo nolol dhamaystiran. Buuggan yar baa kaa caawin doona waxyaalaha ku saabsan hellitaanka sidii aad ugu noolaan lahayd nolol waafaqsan sidii uu abuurahaada ku talagalkiisu ahaa.
O h c a iy c a
Waxaa laga soo minguuriyey buuggan yar, kitaabka ugu wanaagsan ee dunida loogu iibsi badan yahay, waa Kitaabka Qudduuska oo Malaayiin ka mid ah dadweynaha dunida oo idil ku nool ku soo leexiyey ama ku soo hagay inay ka dhex helaan jawaabo qanciya noloshooda suâ&amp;#x20AC;&amp;#x2122;aalihii qotoda dheeraa iyo dhibkii ka haystayba noloshooda. Bilowga buugan yar ilaa dhamaadkiisa wuxuu ku saabsan yahay oo uu ka hadlayaa waxyaalo ku saabsan ILAAH. Ilaahna waa abuurihii dunidan iyo waxa ku jira uunkan oo idil. Wuxuuna ka abuuray dadka u ekaantiisa hab qasdi gaar ahaanayd ahaa. Haddaba maxaa khaldamay? Buugan yar ayaa faahfaahin buuxda kaa siin doonno, oo waliba ku tusi doono sidii aad u heli lahayd isbedel nololeed iyo xidhiidh toos ah oo aad la yeelatid Ilaaha sarreeya. 2
Il e iy h d
O a b d m w
wuxuu Abuuray Samooyinka iyo Dhulalkaba Ugu horreyntii Ilaah samada iyo dhulkuu abuuray. Oo Ilaah wuxuu yidhi, Biyuhu aad ha u soo bixiyeen uun dhaqdhaqaaqa oo badan, oo naf nool leh, haadduna ha duusho dhulka dushiisa xagga meeshii bannaanayd oo samada dhex ahayd. Oo Ilaah wuxuu yidhi, Dhulku ha soo bixiyo wax nool oo caynkiisa dhala, kuwaasoo ah xoolo, iyo waxa gurguurta, iyo dugaagga dhulka oo caynkooda dhala; sidaasayna ahaatay.
DUNIDA ILAAH baa ABUURAY
Ilaahna wuxuu yidhi, Aan qof inoo eg ka samayno araggeenna, oo iyagu ha xukumeen kalluunka badda, iyo haadda hawada, iyo xoolaha, iyo dhulka oo dhan, iyo waxa dhulka gurguurta oo dhan. Oo Ilaah qof buu ka abuuray araggiisa, Ilaah araggiisa ayuu ka abuuray isaga; lab iyo dhaddig ayuu abuuray. Oo Ilaah waa barakadeeyey iyaga; oo Ilaah wuxuu iyaga ku yidhi, Wax badan oo ka sara dhala oo batta, oo dhulka ka buuxsama, mara dhulka, oo u taliya kalluunka badda, iyo haadda hawada iyo wax kasta oo nool oo dhulka kor dhaqdhaqaaqa. Bilowgii 1:1,20,24,26-28 3
waa Aabbaha jacaylka
“Waxaan idiin ahaan doonaa Aabbe, Oo idinkuna waxaad ii ahaan doontaan carruurtayda, ayuu Rabbiga Qaadirka ahu leeyahay.” 2 Korintos 6:18
L k le a 1 4
Waaliddiintooy â&amp;#x20AC;&amp;#x201C; Ninkiinnee baa haddii wiilkiisu kibis weyddiisto, dhagax siinaya?
Ama hadduu malaay weyddiisto, mass siinaya? Haddaba idinka oo shar leh haddaad garanaysaan inaad hadiyado wanaagsan carruurtiinna siisaan, intee ka badan ayaa Aabbihiinna jannada ku jiraa wax wanaagsan uu siin doonaa kuwa isaga weydiista? Matayos 7:9-11
Laakiin innagu waxaynu leennahay Ilaah keliya oo Aabbaha ah, kan wax waluba ka yimaadaan oo innagana Ilaah baa ina leh, iyo Sayid keliya oo Ciise Masiix ah, kan wax waluba ku ahaadeen oo innaguna isagaynu ku ahaannay. 1 Korintos 8:6 5
dadkii way ka leexdeen waddadii Ilaah Dhammaanteen sidii ido baynu u baadiyownay, midkeen waluba jidkiisuu u leexday. Ishacyaah 53:6
Il a d d w
Jidka Ilaah ga kay u Jid an k a aya daya or
Doqonkaa qalbigiisa iska yidhi, Ilaah ma jiro. Iyagu waa qudhun, oo waxay faleen xumaan karaahiyo ah, oo mid wanaag falaa ma jiro. Ilaah wuxuu samada hoos uga soo fiiriyey dadkii ilma aadan, bal inuu arko hadday kuwo wax garanaya oo Ilaah doondoonaa jiraan. Midkood kastaaba dib buu u noqday, oo dhammaantood waxay wada noqdeen dad nijaas ah, oo mid wanaag falaa ma jiro, midnaba. Sabuuradda 53:1-3
Sarreynta Ilaah waxaad ku garan gartaa
Rabbi Ciise Masiixa
Isagu waa u ekaantii Ilaaha aan la arki karin, oo ah curadka uunka oo dhan; waayo, wax kastaba isagaa uumay, waxyaalaha cirarka ku jira, iyo waxyaalaha dhulka joogaba, waxyaalaha la arki karo iyo waxyaalaha aan la arki karinba, hadday yihiin carshiyo ama sayidnimo ama madax ama amarro; wax walba Isagaa uumay oo loo uumay.
W d d lo 1
O w d W
K A 1 8
Waxaa jira Ilaah keliya iyo dhexdhexaadiyo keliya. Waayo, waxaa jira Ilaah keliya iyo dhexdhexaadiye keliya oo u dhexeeya Ilaah iyo qofka, waana ninka Ciise Masiix ah, oo naftiisii dadka oo dhan furashadooda u bixiyey, oo wakhtigiisii qummanaa loo markhaati furay. 1 Timoteyos 2:5-6
Oo Isagu waa dhalaalka amaantiisa iyo u-ekaanta ahaantiisa, oo wax walba wuxuu ku hayaa erayga xooggiisa, oo goortuu nadiifinta dadka dembiyadooda sameeyey dabadeed ayuu wuxuu fadhiistay Weynaha xagga sare midigtiisa. Cibraaniyada 1:3
Ku alla kii Wiilka dafiraa, ma leh Aabbaha; laakiin kan Wiilka qirtaa Aabbuhuu leeyahay. 1 Yooxanaa 2:23 9
Rabbi Ciise wuxuu u keenay
Warka Wanaagsan masaakiinta, la haystyaasha, kuwa la cadaadiyo iyo bukaankankaba iyo siduu Ilaah Ciisaha reer Naasaret ku subkay Ruuxa Qoduuska ah iyo xoogga. Isagu wuu socdaali jiray, wanaagna wuu fali jiray, oo wuxuu bogsiin jiray kuwii Ibliisku caddibay oo dhan; maxaa yeelay, Ilaah baa la jiray isagii. Falimaha Rasuullada 10:38 10
M k a W k
â&amp;#x20AC;&amp;#x153; w w x in k d e
In o a y m
Markaasuu wuxuu yimid Naasaret oo ahayd meeshuu ku koray, oo maalintii sabtida sida caadadiisu ahayd ayuu macbudkii galay, wuuna istaagay inuu wax akhriyo. Waxaa loo dhiibay kitaabkii Nebi Isayos, oo goortuu kitaabkii furay ayuu helay meeshii lagu qoray.
“Ruuxii Rabbiga ayaa i dul jooga, waayo, wuxuu ii subkay inaan Injiilka masaakiinta ku wacdiyo, wuxuuna ii soo diray inaan kuwa xidhan furriinnimada ogeysiiyo iyo kuwa indhaha la’ soo celinta araggooda iyo inaan kuwa nabaraysan soo furfuro, iyo inaan dadka ogeysiiyo sannadda qaabbilaadda ah ee Rabbiga.” Intuu kitaabkii isku laabay ayuu midiidinka u dhiibay oo fadhiistay; oo dadkii sunagoggii ku jiray oo dhan ayaa indhaha ku taagay. Markaasuu bilaabay inuu ku yidhaahdo, Maanta Qorniinkan dhegihiinnu maqlay waa rumoobay. Luukos 4: 16-21
Rabbi Ciise wuxuu lahaa
Awoodda Bogsiinta Fiidkii goortay qorraxdii dhacday, waxay u keeneen kuwa buka oo dhan iyo kuwa jinniyo qaba. Markaasaa dadkii magaalada oo idil albaabka ku soo ururay.Oo wuxuu bogsiiyey dad badan oo cudurro kala cayncayn ah qabay, dadkana jinniyo badan buu ka saaray, oo uma oggolaanin jinniyadu inay hadlaan, waayo, isagay garanayeen. Markos 1:32-34
W S o d
M d ti K g
R c a M fi o ti w N
Waxaa jirtay gabadh laba iyo toban sannadood dhiigbixid qabtay. Silec badanna ayay dhakhtarro badan ka heshay, oo wixii ay lahayd oo dhanna ayay ku bixisay, mana roonaanin laakiinse way ka sii dartay. Markay Ciise hadalkiisii maqashay ayay dadkii soo dhex martay oo dhabarkiisa timid, kolkaasay maradiisa taabatay. Waayo, waxay tidhi, Haddaan dharkiisa iska taabto uun, waan bogsanayaa. Kolkiiba bixiddii dhiiggeeda ayaa joogsatay oo waxay jidhkeedii ka garatay inay cudurkii ka bogsatay. Rabbiga kolkiiba wuxuu iska gartay in xoog ka baxay isagii, oo intuu cidhiidhiga ku soo jeestay ayuu yidhi, Yaa dharkayga taabtay? Xertiisii ayaa ku tidhi, Adigu waad aragtaa dadka badan oo ku cidhiidhinaya. Ma waxaad na leedahay, Yaa i taabtay? Kolkaasuu hareerihiisii ka fiirfiiriyey inuu arko tan waxan samaysay. Gabadhiise way cabsatay oo gariirtay iyadoo garanaysa wixii loogu sameeyey. Markaasay timid oo hortiisa ku dhacday oo runtii oo dhan u sheegtay. Kolkaasuu wuxuu iyada ku yidhi, Gabadhay, rumaysadkaaga ayaa ku bogsiiyey. Nabad ku tag, cudurkaagiina ka bogso. Markos 5:25-34
awoodda amar oo ka xoog badan tan ruuxyada shayddaanka.
Ciise iyo xertiisii markaasay Kafarnaâ&amp;#x20AC;&amp;#x2122;um gaareen, oo markiiba Sabtida wuxuu galay sunagogga oo dadka wax baray. Waxayna la yaabeen wax bariddiisa, waayo, wuxuu wax u barayay sida mid amar leh, oo uma uu baraynin sida culimada. Kolkaasaa waxaa macbudkii ku jiray nin jinni wasakh leh qaba, wuuna qayliyey, oo wuxuu yidhi, Maxaa inoo dhexaya, Ciise reer Naasaredow? Ma waxaad u timid inaad na laysid? Anigu waa ku garanayaa kii aad tahay Kan Qoduuska ah ee Ilaah. Ciise baa canaantay oo ku yidhi, Aamus oo ka soo bax. Goortii jinnigii dhusukhaysnaa lahaa gilgilay oo cod weyn ku qayliyey, ayuu ka soo baxay. Dhammaantoodba way la wada yaabeen, sidaa aawadeed iyaga dhexdooda way isweydiiyeen oo yidhaahdeen, Waa maxay waxani? Ma wax barid cusub baa? Xataa jinniyadii dhusukhaysnaa lahayd amar buu ku amraa, wayna yeelaan. Markos 1:21-27
Ciise wuxuu lahaa
awood amar uu ku siiyo uunka
Ayaamahaas middood waxaa dhacay inuu doonni fuulay isaga iyo xertiisiiba, wuxuuna iyaga ku yidhi, Dhanka kale oo badda aan u gudubno, goortaasay dhaqaaqeen. Laakiin intay socdeen ayuu hurday, oo waxaa baddii ku soo dhacay duufaan weyn oo dabayl ah; doonnidiina ayaa buuxsamaysay, oo halis bay ku jireen. Markaasay isaga u yimaadeen oo intay toosiyeen ayay ku yidhaahdeen, Macallimow, macallimow, waa lumaynaaye. Markaasuu kacay oo canaantay dabayshii iyo hirarkii biyaha. Goortaasay degeen oo xawaal baa dhacday. Markaasuu wuxuu iyaga ku yidhi, Rumaysadkiinnii meeh? Iyagoo cabsanaya oo yaabban waxay isku yidhaahdeen, Haddaba yuu yahay kan amra xataa dabaysha iyo biyaha oo ay yeelaan? Luukos 8:22-25
awood uu ku cafiyo dembiyada SIDEE BUU KU SAMEEYEY SIDAA?
K w M a iy
G w b A g q D o le k a
K o y y
Kolkaasaa niman waxay sariir ku soo qaadeen nin curyaan ah, waxayna doonayeen inay gudaha geliyaan oo hortiisa dhigaan. Markay heli waayeen meel ay ka geliyaan dadkii badnaa aawadiis, ayay guriga korkiisa sare fuuleen, oo saqafka ayay ka dusiyeen isaga iyo sariirtiisii, oo ay dhex dhigeen Ciise hortiisa. Goortuu iimaankoodii arkay ayuu ku yidhi, Nin yahow, dembiyadaadu waa kaa cafiyan yihiin. Kolkaasaa culimadii iyo Farrisiintii waxay bilaabeen inay fikiraan iyagoo leh, Ayuu yahay kan caytamayaa? Ayaa dembiyo cafiyi kara Ilaah keliya mooyee? Laakiin Ciise goortuu fikirradoodii gartay ayuu u jawaabay oo ku yidhi, Maxaad qalbiyadiinna uga fikiraysaan? Iyamaa shaqa yar, in la yidhaahdo, Dembiyadaadu waa kaa cafiyan yihiin, ama in la yidhaahdo, Kac oo soco? Laakiin si aad ku garataan in Wiilka Aadanahu dhulka ku leeyahay amar uu dembiyada ku cafiyo (ayuu ninkii curyaanka ahaa ku yidhi), Waxaan kugu leeyahay, istaag oo sariirtaada qaado oo aqalkaaga tag. Kolkiiba iyaga oo arkaya ayuu istaagay, oo qaatay wixii uu ku jiifay, oo gurigiisa tegey, isagoo Ilaah ammaanaya. Markaasay wada yaabeen oo Ilaah ammaaneen, aad bayna u cabsadeen, oo waxay yidhaahdeen, Maanta waxaannu aragnay waxyaalo yaab leh. Luukos 5:18-26
SIDEE BUU QOF I JECEL ANIGA ANOO DEMBIILA AH UGU DHIMAN KARAA DEMBIYADEEDA?
Rabbi Ciise wuxuu u yimid
inuu u dhinto dembiyadeenna Laakiinse Masiixu waa inoo dhintay intaynu weli dembiilayaal ahayn, oo sidaasuu Ilaah jacaylkiisii inoogu caddeeyey.â&amp;#x20AC;&amp;#x192; Rooma 5:8
Waxaana lala waday laba kale oo sharfalayaal ah in lala dilo. Markay yimaadeen meeshii la yidhaahda dhakada, halkaasay iskutallaabo ku qodbeen isaga iyo xumaanfalayaashii, mid midigta, kan kalena bidixda.
Oo isagu dembiyadeennii wuxuu ku qaaday jidhkiisii geedka saarnaa, si innagoo dembi kala dhimannay aynu xaqnimo ugu noolaanno. Waxaad ku bogsateen calaamadihii ushii lagu garaacay.
1 Butros 2:24
Maxaa wacay, Masiixiba mar buu u xanuunsaday dembiyada. Isagoo xaq ah ayuu u xanuunsaday kuwa aan xaqa ahayn aawadood inuu inoo keeno Ilaah. Xagga jidhka waa laga dilay, laakiinse xagga ruuxa waa laga nooleeyey.
1 Butros 3:18 21
wuxuu ka adkaaday geeridii Wuuna nool yahay maantadan aan joogno Dharaartii ugu horraysay ee toddobaadka, goortii waagii beryayay, ayay xabaashii yimaadeen, iyagoo wada dhirtii udgoonayd oo ay diyaargareeyeen. Oo waxay arkeen dhagixii oo qabrigii laga giringiriyey. Markaasay galeen, laakiin kama ay helin meydkii Rabbi Ciise. Waxaa dhacay, intay waxaas ka sii welwelsanaayeen, in laba qof oo dhar dhalaalaya sitaa ag taagnaayeen.
Dumarkii iyagoo baqaya ayay wejigooda hoos ugu foororiyeen dhulka. Kolkaasay ku yidhaahdeen iyaga, Maxaad kan nool uga dhex doondoonaysaan kuwii dhintay? Isagu halkan ma joogo, laakiinse wuu sara kacay. Xusuusta siduu idiinla hadlay intuu Galili weli joogay, isagoo leh, Wiilka Aadanaha waa in loo gacan geliyo dembiilayaasha, oo iskutallaabta lagu qodbo, oo maalinta saddexaad uu soo sara kaco. Luukos 24:1-7
Sababtoo ah, markii ugu horraysay waxaan idiin dhiibay waxaan aniguba helay, oo waxa weeye, Masiixu wuxuu u dhintay dembiyadeenna sida Qorniinku leeyahay, waa la aasay isaga, oo maalintii saddexaad ayaa la sara kiciyey, sida Qorniinku leeyahay. Markaasuu Keeyfas u muuqday, markii dambena laba iyo tobankii. Kolkaasuu wuxuu mar keliya u muuqday kuwo ka badan shan boqol oo walaalo ah, kuwo weli intoodii badnayd ay hadda joogto, laakiin qaar baa dhintay. 1 Korintos 15:3-6
Rabbi Ciise wuxuu dusha ku qaatay
ciqabtii xukunkii dembiyadeena awgood
Amaanta heerka sare ee Ilaahay
Maxaa yeelay, dadkoo dhan way wada dembaabeen oo gaadhi waayeen ammaanta Ilaah; iyagoo hadiyad ahaan xaq lagaga dhigay nimcadiisa xagga madaxfurashada Ciise Masiix ku furtay, kan Ilaah u soo bixiyey inuu dhiiggiisa kafaarogud ku noqdo xagga rumaysadka la rumaystay dhiiggiisa aawadiis, inuu xaqnimadiisa ku caddeeyey dembidhaafka uu dembiyadii hore loo sameeyey ku dhaafay samirkii Ilaah. Rooma 3:23-25
Markaasaa Ciise wuxuu Toomas ku yidhi, Anigu waxaan ahay waddada iyo runta iyo nolosha. Ninna Aabbaha uma yimaado, xaggayguu ku yimaado maahee. Yooxanaa 14:6 Heerka dadka
Ma gaari kartid darajada Ilaah kumana raalli gelin kartid Isaga (Ilaah) farsamooyinkaada shakhsiyeed, oo waxaad u baahan tahay inuu ku samata bixiyo Rabbi Ciise. Rabbi Ciise waa waddada keliya ee Ilaah loogu tagi karo.
A hee ee
Waxaan ku gaari karnaa amaanta heerka Ilaah rumaysadka Masiixa keliya Amaanta heerka sare ee Ilaahay
Rasuul Bawlos wuxuu yidhi, “Hadalkanu waa run, waana mid mudan in la wada aqbalo, in Ciise Masiix dunida u yimid inuu badbaadiyo dembiilayaasha anoo ah kan ugu daran. Laakiin sababtaas daraaddeed waa la ii naxariistay in, anigoo ah kan ugu daran, Ciise Masiix iga muujiyo dulqaadashadiisa oo dhan, inaan tusaale u noqdo kuwa hadda dabadeed isaga rumaysan doona inay nolol weligeed ah helaan.” 1 Timoteyos 15-16
Cid kale badbaadada lagama helo, maxaa yeelay. ma jiro magac kale samada hoosteeda oo dadka dhexdooda loo bixiyey oo waajib inoo ah inaynu ku badbaadno. Falimaha Rasuullada 4:12
Nolosha Weligeed ah
waxaad ku heli kartaa oo keliya rumaysadka Rabbi Ciise
M o d ru x
G Waayo, mushahaarada dembigu waa geerida, laakiinse hadiyadda Ilaah waa nolosha weligeed ah ee laga helo Rabbigeenna Ciise Masiix. Rooma 6:23
Guddoon badbaadada ku timid hadiyadda Ilaah ee aan qiimo kuugu fadhin Ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey Madigiisa keliya oo dhashay in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah. Ilaah Madiga uguma soo dirin dunida inuu xukumo dunida, laakiin wuxuu u soo diray inay dunidu ku badbaaddo isaga. Yooxanaa 3:16-17 26
â&amp;#x20AC;&amp;#x153;W a g w W a w A
U oggoloow noloshaada Rabbi Ciise Masiix Ciise wuxuu yidhi, “Fiirri, albaabkaan taaganahay oo garaacayaa; haddaba haddii nin codkayga maqlo oo albaabka iga furo, waan u soo gelayaa, oo waan la cashayn, isna wuu ila cashayn.” Muujintii Ciise Masiix 3:20
Rumayso inuu adiga dartaa Ciise u dhintay Maxaa yeelay, haddaad carrabka ka qiratid in Ciise yahay Rabbiga, oo aad qalbiga ka rumaysatid in Ilaah isaga ka sara kiciyey kuwii dhintay, waad badbaadi doontaa, waayo, qalbiga wax baa laga rumaystaa xagga xaqnimada, carrabkana wax baa laga qirtaa xagga badbaadinta. Rooma 10:9-10
Garo inaad tahay mid ka mid ah caruurta Ilaah! Laakiin in alla intii yeeshay, wuxuu siiyey amar ay carruurtii Ilaah ku noqdaan, kuwaasu waa kuwii magiciisa rumaystay. Yooxanaa 1:12
Imminka ayaad heli kartaa Ciise Masiixa Si qalbiyan ah ugu bari baryadan:-
“Waad ku mahadsan tahay Ciise Masiixow inaad iigu dhimatid aniga darteey iskutallaabta dusheeda, waxaan yaqiinsaday in aan gaari Karin amaanta Ilaah oo aan aniga isbadbaadin Karin! Anigu waan kuu baahnahay Ciisow, Iga cafi dembiyadayda oo i badbaadi. Waxaan kaaga mahad celinayaa jeceylkaad i jeclaatay iyo sidaad ii aqbashay inaan kuwaada ahaado. Mahadi ha kuu ahaato iminka waxaan ahay sida ilmahaIlaah!” Amen 27
ayaa kaa dhowra dhibaatooyinkaada Isagaa kaa gargaari sidaad u soo kaban lahayd.
Haddii aad salaad Ilaah bari ah ku weyddiisato ereyada ku xusnaa qoraalkii bogga 27aad dembiyadaada waa la cafiyey. Waxaad tahay ilmaha Ilaah! Ruuxa Qudduuska ayaa kuugu dhex nool. Wuxuu kaa caawin doonaa inaad noqoto xerta Rabbi Ciise Masiixa – ku dhiirrigelin, kuguna wadi doonaa hadba nolol maalmeedkaada. Ciise wuxuu yidhi “Markuu kan Ruuxa runta ahu yimaado, wuxuu idinku wadi doonnaa runta oo dhan.” Yooxanaa 16:13
S w d d lo e k b
Ruuxa Qudduuska wuxuu ku xusuusin doonnaa jacaylka Ilaah iyo siduu kuu dhowro. Dhibka ku soo food saarana kagama bixi kartid awooddaada dadnimo. Waxaad haysataa balanqaadyo cajiib ah oo uu Ilaah kuugu siiyey qalbi qaboojin, nabdooni, xigmad iyo dhiiranaan buuxda kuwan hoos ku qoran ayaa ka mid ah:-
Markaad Cabsato Ha baqinna, waayo, waan idinla jiraa, ha nixina, maxaa yeelay, Ilaahiinna baan ahay, waan idin xoogayn doonaa, waanan idin caawin doonaa, oo waxaan idinku tiirin doonaa midigtayda xaqa ah. Ishacyaah 41:10
Markay Maahsanaan ku soo foodsaarto Kuwa xaqa ahu way qayshadeen, oo Rabbigaa maqlay, oo wuxuu iyaga ka badbaadiyay dhibaatooyinkoodii oo dhan. Rabbigu waa u dhow yahay kuwa dembigooda ka walwalsan, oo kuwa ruuxoodu qoomammaysan yahayna wuu badbaadiyaa. Sabuurrada 34:17-18 28
L ja d c la n k 1
Markaad bukooto Sida runta ah wuxuu xambaartay xanuunyadeennii, wuxuuna qaatay walwalkeennii, laakiinse waxaynu ku xisaabnay mid belaayo ku dhacday, oo Ilaah dilay, oo dhibaataysan. Laakiinse waxaa isaga loo dhaawacay dambiyadeennii, waxaana loo nabareeyey xumaatooyinkeenna, edbintii nabaadiinadeennana dushiisay ku dhacday, dildillaaciisiina waynu ku bogsannay. Ishacyaah 53:4-5
Markaad daal dareento Ii kaalaya kulligiin kuwiinna hawshaysan oo culaabaysanow, oo anigu waan idin daalbixin doonaa. Harqoodkayga dushiinna ku qaata oo wax iga barta; waayo, waan qaboobahay, qalbigayguna waa hoos-eeyaa, oo naftiinna nasashaad u heli doontaan. Maxaa wacay, harqoodkaygu waa dhib yar yahay, oo rarkayguna waa fudud yahay. Matayos 11:28-30
Markaad geeri ku dhawaato Laakiin walaalayaalow, ma doonayno inaad jaahil ka ahaataan waxa ku saabsan kuwii dhintay ee waxaannu doonayna inaydnan calool xumaan sida kuwa kale oo aan rajo lahayn. Sababta oo ah, haddaynu rumaysan nahay in Ciise dhintay oo haddana soo sara kacay, haddee sidaas oo kalaa kuwii Ciise rumaysnaa oo dhintay Ilaah la keeni doonaa isaga. 1 Tesoloniika 4:13-14
Ciise ayaa ku yidhi, Anigu waxaan ahay sarakicidda iyo nolosha. Kii i aamina, in kastoo uu dhinto, wuu noolaan doonaa. Kii kasta oo nool oo i rumaystaa weligii ma dhiman doono. Waxan ma rumaysan tahay? Yooxanaa 11:25-26 29
Markaad Nabadgelyo la’aan dareento
Haddaba maxaan waxyaalahan ka niraahnaa? Haddii Ilaah inala jiro, yaa inaga jira ah? Kii aan xataa Wiilkiisa lexejeclaysan, laakiinse innaga dhammaanteen u bixiyey, sidee buusan wax walbana inoola siin doonin isaga? Rooma 8:31-32
W w m a a n
Markaad welwasho Haddaba sidaas daraaddeed gacanta xoogga leh oo Ilaah iska hoosaysiiya, si uu wakhtigiisa idiin sarraysiiyo. Welwelkiinna oo dhan isaga saara, waayo, isagu dan buu idinka leeyahay . 1 Butros 5:6-7
Marka aad ka welwasho xaalad lacag la’aan oo ku soo foodsaartay Ilaahaygu wuu idin siin doonaa wixii aad u baahan tihiin oo dhan, sida ay tahay taajirnimadiisa xagga ammaanta Ciise Masiix ku jirta. Filiboy 4:19
Markaad cadhooto Haddaad xanaaqdaan, ha dembaabina. Qorraxdu yay idinka dhicin idinkoo cadhaysan.
xu w ta a
Q d ya Ila
Markaad kelinimo dareento Ciise wuxuu yidhi oo bara inay dhawraan wax walba oo aan idinku amray, oo bal fiiriya mar walba ayaan idinla joogaa xataa ilaa wakhtigu dhammaado. Matayos 28:20 30
Marka lagu caayo oo lagu aflagaaddeeyo Waxaa barakadaysan kuwa xaqnimada aawadeed loo dhibaateeyo, waayo, boqortooyada jannada iyagaa leh. Waad barakadaysan tihiin markki laydin caayo, oo laydin kadeedo, oo wax walba oo xun oo been ah laydinka sheego aawaday. Farxa oo reyreeyaa, waayo, jannada abaalgudkiinnu waa ku weyn yahay, waayo, sidaasay u silcin jireen nebiyadii idinka horreeyey. Matayos 5:10-12
Markii caddaalad darro jirto
Rabbiga Masiixa ah qalbiyadiinna qoduus kaga dhiga, oo mar kasta heegan u ahaada inaad u jawaabtaan nin alla ninkii wax idinka weydiiya sabab ku saabsan Dulmi rajada aad leedihiin, laakiinse qabow iyo baqdin ugu jawaaba, idinkoo niyad wanaagsan leh, in markii wax xun laydinka sheego, ay ceeboobaan kuwa caaya dabii- caddiinna wanaagsan ee xagga Masiixa ah. Sabatoo ah haddii ay doonista Ilaah tahay, waxaa ka wanaagsan inaad samafalidda u xanuunsataan intii aad u xanuunsan lahaydeen sharfalidda. 1 Butros 3:15-17
Markaad isku buuqdo Qofkii fikirkiisa isku kaa halleeyo nabad dhan baad ku dhawri doontaa, maxaa yeelay, adiguu ku aaminsan yahay. Rabbiga weligiinba rumeeya, waayo, Rabbiga Ilaaha ahu waa dhagax daa’im ah. Ishacyaah 26:3-4
Markaad qirasho dareento
Haddaynu dembiyadeenna ku hor sheegno, isagu waa aamin iyo caadil inuu dembiyadeenna inaga cafiyo, oo uu inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan. 1 Yooxanaa 1:9 Rabbigu wuxuu leeyahay, Iminka kaalaya oo aynu u wada fiirsannee. In kastoo ay dembiyadiinnu guduudan yihiin, sida baraf cad oo kalay u caddaan doonaan, oo in kastoo ay cascas yihiin, sida suuf oo kalay ahaan doonaan. Ishacyaah 1:18
Markii aad samir yeelan weydo Rabbiga ku hor daganow, oo isaga samir ku sug, oo ha isku dhibin kii jidkiisa ku barwaaqaysan iyo ninkii hindisooyin shar ah sameeya toona. Sabuurada 37:7
Xigashada Qoraalkan waxaan ka soo qaaday Kitaabka Qudduuska.
Copyright ÂŠ 2014 FL Media Xuquugda quraalkan Codka Nimcada Runta (MERF)
Printed in India for MediaServe, 2015 www.mediaserve.org
Ilaahayow, waxaan kaaga mahad celinayaa inaan kuugu yeeri karo Eebbahaygow. Si hoose ayaan kaaga mahadcelinayaa inaad ii soo dirtay Ciise inuu u dhinto aniga, si uu iiga soo furto ama iiga soo samta bixiyo dembiyadaan ku hoos jira iyo qirasho. Waad ku mahadsan tahay jacaylkaada iyo xanaanadaada aad i siisay aniga. Dhibaato kuma jirto haddii ay wax yar ii dheh ama waxbadan inay kuu ahaatay inaad xal u hesho. Waad ku mahadsan tahay balan qaadyada cajiibka ah ee aad inagula ballantay Kitaabka Qudduuska dhexdiisa. Waxaan kaa baryaynaa Ilaahow inaad Ruuxa Qudduuska inuu weligiisa inala jiro, na siiyo gargaar iyo hoggaamin qalbiqaboojiyana maalin walba nolosheenna. Waxaan kale oo aan kaaga mahad celinaynaa Ilaahow fraxaddan iyo Nabaddan aan haysano ee aad inagu siisay keliya markaan adiga ku rumasysanay ka dib. Amen.
Sawirada waxaa sameeyey alfred luther
Haddii aad jeceshahay inaad wax ka ogaato Kitaabka Qudduuska iyo aqoonta Ilaah iyo qorshaha uu kuu hayo, fadlan buuxi formkan hoose, oo inoo soo dir: ___(name)___, P.O. Box __xxx__, __(address)______. (If you donâ&amp;#x20AC;&amp;#x2122;t want to remove this page, you may write on a postcard.)
Waxaan xiisaynayaa inaan wax ka ogaado qoraalka Kitaabka Qudduuska iyo qorshaha uu Ilaah ii hayo aniga. 4	Hoos baan ka saxay dookhayga.
Waxaan doonayaa inaan bilaabo aqoon korosiga waxbarshada casharada gaagaaban ee ku saabsan Kitaabka Qudduuska. Waxaan diyaar u ahay nolosha Ciise iyo in aan helo qof wax iga bara waxyaalaha ku saabsan Isaga. Waxaan doonayaa inaan helo nuqulka Kitaabka Quduuska qaybtiisa Axdiga Cusub oo ahaa inta badan xigashadii laga soo xigtay buuggan yar. Waxaan ku soo qoray magacayga iyo cinwaankayga (XARFAHA FARTA WAAWEYN): Magaca:
The Secret of True Life / Somali